Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Sports » I-Expo 2020 eDubai ifumana ukuhanjiswa okukhethekileyo kwi-US Open
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Sports • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngaphandle kweNew York, iingxowa zetennis ziya kusasazwa ngaphakathi kweendlela ze-Emirate e-United States.
UDon Victor Mooney wayengumdlali wokuqala weTennis omnyama ukuphumelela izihloko ezingatshatanga kwi-US Open, iAustralia Open kunye neWimbledon.
UDon Victor Mooney uqokelela iirakethi zetenisi, iibhola kunye nezinto zesikolo zabantwana ngexesha leUS Open.
Ngenxa yesibetho se-COVID-19 esitsha se-Expo 2020 eDubai ngo-Okthobha 1, 2021-Matshi 31, 2022.
Wabheqa iAtlantic kwaye wahamba ngebhayisikile e-Emirates. Ngoku, uDon Victor Mooney, uMongameli we-HR 1242 Resilience Project, uqokelela iirakethi zetenisi, iibhola, kunye nezinto zesikolo zabantwana ngexesha le-US Open. Eli phulo libizwa ngokuba yi-Operation Arthur Ashe. UArthur Ashe waxhasa amandla eencwadi kunye nenkundla yentenetya. UAshe wayengumdlali wokuqala weTennis omnyama ukuphumelela izihloko ezingatshatanga kwi-US Open, iAustralia Open kunye neWimbledon.
Umkhankaso wokuqokelela nokupakisha uzakuphela ngoSeptemba 12. Ngaphandle kweNew York, iingxowa zetenisi ziya kuhanjiswa ngaphakathi kweendlela zokungena e-Emirate e-United States. Ingxowa yentenetya yokugqibela iya kusiwa eDubai Expo 2020, evula ngo-Okthobha 1, 2021.
If Emirates I-cabin crew ine-layover eyandisiweyo eNew York, bamkelekile ukusinceda ukupakisha iingxowa zetenisi, utshilo uMooney.
Expo 2020 icwangciselwe ukuba yi-World Expo eza kubanjwa yi-Dubai e-United Arab Emirates, eyayicwangciselwe umhla we-20 Okthobha 2020 - 10 Epreli 2021. Nangona kunjalo, ngenxa yobhubhane we-COVID-19 e-United Arab Emirates, imihla emitsha ngo-Okthobha 1 , 2021-Matshi 31, 2022.